Na-agbasa saịtị gị na CSS Sprites | Martech Zone
Na-agbasa saịtị gị na CSS Sprites
Monday, July 9, 2012 Sọnde, Septemba 8, 2013 Douglas Karr
M na-ede banyere ọsọ ọsọ dị ntakịrị na saịtị a ma ọ bụ akụkụ dị mkpa nke nyocha na mmelite anyị na-eme na saịtị ndị ahịa anyị. Ewezuga ịkwaga na sava dị ike na iji ngwaọrụ dịka Netwọk Nzipu Afọ, enwere ọtụtụ usoro mmemme ndị ọzọ onye nrụpụta weebụ nwere ike iji.
Standardkpụrụ maka mpempe akwụkwọ mbụ nke Cascading dị afọ 15 ugbu a. CSS bụ mmalite dị mkpa na mmepe weebụ n'ihi na ọ kewapụrụ ọdịnaya na imewe. Lee anya na blọọgụ a na ihe ọ bụla ọzọ na imirikiti nke ọdịiche dị iche iche dị na mpempe akwụkwọ agbakwunyere. Stylesheets dịkwa mkpa n'ihi na a na-echekwa ya na mpaghara n'ime oghere n'ime ihe nchọgharị gị. N'ihi ya, ka ndị mmadụ na-aga na saịtị gị, ha anaghị ebudata mpempe akwụkwọ oge ọ bụla… naanị ọdịnaya peeji.
Nke a, n’aka nke ya, na-ebelata saịtị gị. A ngwa ngwa saịtị nwere ike inwe mmetụta dị egwu na njikọ aka na ntụgharị na ndị na-ege gị ntị na-eme. Atụmatụ nke ndị mmepe weebụ na-eji eme ihe bụ itinye ihe oyiyi niile n'otu faịlụ… a na-akpọ a sprite. Kama ịrịọ arịrịọ maka ihe oyiyi faịlụ gị ọ bụla, ugbu a ọ dị mkpa ka e nwee otu arịrịọ maka otu onyonyo ahụ!
Can nwere ike gụọ gbasara otú CSS Sprites si arụ ọrụ na CSS-Aghụghọ or Smashing Magazine si CSS Sprite post Isi okwu m abụghị igosi gị otu esi eji ha, naanị ịnye gị ndụmọdụ iji hụ na otu mmepe gị na-etinye ha na saịtị ahụ. Ihe atụ nke aghụghọ CSS na-egosi onyonyo 10 bụ arịrịọ 10 wee gbakwunye na 20.5Kb. Mgbe a chịkọtara na otu sprite, ọ bụ 1 arịrịọ nke ahụ bụ 13kb! Oge arịrịọ njem na oge nzaghachi maka onyonyo 9 apụla ugbu a ma belata ọnụọgụ data karịa karịa 30%. Mee ka ọnụ ọgụgụ ndị ọbịa na saịtị gị bawanye ụba na ị ga-asachapụ ụfọdụ akụ!
The Apple Ogwe ụzọ igodo bụ ezigbo ihe atụ. Bọtịnụ ọ bụla nwere steeti ole na ole… ma ị nọ na peeji ahụ, pụọ na ibe ahụ, ma ọ bụ na-emegharị bọtịnụ ahụ. CSS na-akọwa nhazi nke bọtịnụ ahụ ma gosipụta mpaghara nke steeti ziri ezi na ihe nchọgharị ndị ọrụ. Steeti ndị a niile dara na otu eserese - mana mpaghara gosipụtara site na mpaghara dịka akọwapụtara na mpempe akwụkwọ ụdị.
Ọ bụrụ na ndị mmepe gị hụrụ ngwa ọrụ n'anya, enwere ọtụtụ ihe nwere ike inyere ha aka, gụnyere Kompas CSS kpuchie ya, Arịrịọ maka ASP.NET, CSS-Spriter maka Ruby, CSSSprite edemede maka Photoshop, SpritePad, Ntughari, Udochukwu, ZeroSprites, Fondue si CSS Sprite Generator, Sprite Master Web, Na Udochukwu Bookmarklet.
Nseta ihuenyo Sprite Master Web:
Martech Zone anaghị eji ihe osise dị na gburugburu isiokwu ya, yabụ na anyị ekwesịghị itinye usoro a n'oge a.
Tags: caddị akwa akwaCSScss spritecss ebeleihu peejispriteụdị mpempe akwụkwọ
Ihe kpatara atụmatụ Twitter na Nchọpụta Twitter abụghị ihe Mgbanwe Egwuregwu
Online Testing Mkpa
Sep 13, 2012 na 5: 06 AM
Chere… abụghị mkpokọta ahụ niile “onyogho” (ma ọ bụ “ụgbọelu”), na nke ọ bụla sub-image (ma ọ bụ sub-otu nke ihe oyiyi na nke animated ma ọ bụ mmekọrịta na-agbanwe agbanwe) a “sprite”?
Eleghi anya akpọgharịrị ihe ahụ kemgbe oge gara aga m jidere ụdị ihe a mana m ga-a swornụ iyi na Sprite bụ mmewere nke gosipụtara, ọ bụghị nnukwu tebụl data e wepụtara.
(“Okpokoro sprite” rite nke ahụ abụghị ya?)
Sep 13, 2012 na 5:09 PM
Anyị nwere ike na-ekwu ihe abụọ dị iche iche, Mak. Site na CSS, ị nwere ike ịkọwapụta nke ọma 'akụkụ' nke faịlụ onyonyo iji gosipụta njikwa. Nke a na - enye gị ohere itinye ihe onyonyo gị niile na ‘sprite’ otu ebe wee tụọ aka na mpaghara ịchọrọ igosipụta CSS.